VIDEO. Rachel Legrain-Trapani: paTELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU »VIDEO. Rachel Legrain-Trapani: panguva
VIDEO. Rachel Legrain-Trapani: panguva
Rachel Legrain-Trapani guard of Mutambo weCannes a memory ... funny. Gore rimwe chete, apo aimbova Miss France akaenda kuna Croisette sevamwe vanozivikanwa, akafungidzira maminetsi mashomanana nemutambi akakurumbira, pamutambo. While the 72th edition yemutambo iye zvino ari mukutengesa zvakakwana, musikana wechidiki wemakore 30 akasarudza kuudza zvakadzama iyi anecdote pachidimbu che TPMP People, Chishanu 17 May. Usati wataura pachena, kuzivikanwa kweizvi.
"Ndinoenda kumabiko, uye ikoko ndinozviona uye ndinotaura kuti handizvo zvakaipa, uye ndinoona kuti tinotanga kutarisa mashoma"anotsanangura Rachel Legrain-Trapani. Hakuna kana vaviri, Miss France 2007 sarudza "Ipa ushingi" kunwa kirazi ye champagne, zvino vaviri ... "Ini handisati ndashandiswa nayo, saka inofamba pamusoro panguanozviudza asati aenderera mberi. Uye ikoko anouya uye ini ndinoedza kutaura, kusiya mutongo, muchiChirungu, uye ikoko ... ndiro dambudziko "iye anobvumira kuenda.
Zuva racho @RachelTrapani akaedza kutamba nenyota yeAmerica #Cannes ! #TPMPPeople pic.twitter.com/OTOTVnpCcJ
- TPMP Vanhu (@TPMPPeople) Dai 17, 2019
Kana iye asingakanganwi zvakawanda zvezvaakamuudza, kunze kwekuti kuedza kwakange kusina kugadziriswa, Rachel Legrain-Trapani haikwanisi kunyarara kuti ndiani uyu aive akakurumbira. Mushure mokukurudzirwa Matthieu Delormeau, isu pakupedzisira tinoona kuti yaiva ... Ryan Phillippe ! Zvakanyatsozivikanwa nokuda kwebasa rake mumafirimu evechidiki saiye Kuita zvepabonde, mutambi uyu ndiyewo murume wekare Reese Witherspoon. Mutori wenhau weAmerica uye iye zvechokwadi akaroorwa kubva ku1999 kusvika ku2007, uye akava nevana vaviri pamwechete.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.closermag.fr/people/video-rachel-legrain-trapani-lors-d-un-festival-de-cannes-elle-revele-avoir-flir-970248
Chikwata cheRoyal: Sei Muchato waKu-Girlfriend, Pippa Middleton, Vachava paMuchato?
Vanhu: "Regai kunditsoropodza!": Mutongi weNorway anozivisa pachena kuti ari murudo
I18h RTL 20 May 2019 - VIDEO